Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Ubuntu 14.04 Trusty Tahr | Kubva kuLinux
Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Ubuntu 14.04 Trusty Tahr
Ubuntu 14.04 Ruvimbo Tahr akaona mwenje mazuva mashoma apfuura. Sezvatinoita nekusunungurwa kwega kweiyi inozivikanwa distro, heano mamwe zvinhu zvaunofanira kuita mushure mekugadzira kuisirwa kubva pakutanga.
11 11. Isa iyo Compiz & plugins Kugadziridza maneja
13 13. Bvisa kutsvaga "kwekutengesa" kubva kuDash
Zvichida kuti mushure mekunge Ubuntu 14.04 yaburitswa, mitsva inogadziridza yaonekwa pamapakeji akasiyana ayo mufananidzo weIO wakaparadzirwa neCanonical unouya nawo.
sudo apt kuvandudza sudo apt kusimudzira
MuDash ini ndakanyora Tsigiro Yemutauro uye kubva ipapo uchakwanisa kuwedzera mutauro waunoda.
Duramazwi muSpanish reLibreOffice / OpenOffice
Kana iwe usina iyo yekuperetera yekuongorora muSpanish, zvinokwanisika kuiwedzera neruoko seinotevera:
1. Enda kune LibreOffice yekuwedzera nzvimbo
2. Tarisa iyo Spanish maduramazwi
3. Dhawunirodha duramazwi reunofarira (zvakajairika kana zvakanangana nenyika yako
Nezve izvi tichava neOXT faira. Kana zvisiri, iwe unofanirwa kuchinja kuwedzerwa kwefaira rakadzingwa.
4. Vhura LibreOffice / OpenOffice, sarudza Zvishandiso> Kuwedzeredza uye tinya Wedzera, tinoenda kudhairekitori uko iko kurodha pasi faira kuri uye tinoiisa.
Kuti uone gwara rakazara rinotsanangura maitiro ekuisa Spanish spelling uye grammar cheki muLibreOffice / OpenOffice, ini ndinokurudzira kuverenga ichi chekare chinyorwa. Isu takagadzirirawo a gwara kuisa iyo Spanish spell checker muFirefox / Chromium.
Ubuntu inofanirwa kuona otomatiki nekukuzivisa iwe kuwanikwa kwevatyairi ve3D. Muchiitiko ichocho, iwe uchaona chiratidzo chekadhi revhidhiyo pane yepamusoro pani. Dzvanya pane iyo icon uye uteedzere rairo. Izvo zvakare zvinokwanisika kumisikidza yevanotyaira madhiraivha kubva ku Dash> Kuwedzera Dhiraivha.
sudo apt kuisa ubuntu-inorambidzwa-yekuwedzera
sudo apt kuisa libdvdread4 sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh
sudo yekuwedzera-apt-repository ppa: tualatrix / ppa sudo apt kugadzirisa sudo apt kuisa ubuntu-tweak
sudo yekuwedzera-apt-repository ppa: dhiziri / kuyedza sudo apt kugadzirisa sudo apt kuisa unsettings
sudo apt kuisa rar unace p7zip-yakazara p7zip-rar sharutils mpack lha arj
sudo apt kuisa synaptic
Izvo hazvidiwe nekuti isu tichigona nguva dzose kushandisa iyo "apt" yekuraira, asi pano ndinoisiira kune avo vanoida iyo:
sudo apt kuisa aptitude
sudo apt kuisa gdebi
sudo apt kuisa dconf-maturusi
Kana iwe ukasakwanisa kuwana application yekuita zvaunoda kana iwe usingade maficha anouya nekusarudzika muUbuntu, unogona kuenda kuUbuntu Software Center.
Chinja icho kubva Kubuntu kuenda kuGNOME Flashback
Kana iyi sarudzo ikasawanikwa, edza kumhanya unotevera kuraira kutanga:
sudo apt gnome-chikamu-flashback
Kana iwe uchida kuyedza GNOME Shell pane Kubatana.
Kuisa: isa unotevera kuraira mune terminal:
sudo inokodzera kuisa gnome-shell
sudo yekuwedzera-apt-repository ppa: ricotz / kuyedza sudo yekuwedzera-apt-reppa ppa: gnome3-timu / gnome3 sudo yekuwedzera-apt-repository ppa: gnome3-timu / gnome3-staging sudo apt kugadzirisa sudo apt kuisa gnome-shell gnome- tweak-chishandiso gnome-shell-extensions
Chenjedzo: kuisa GNOME Shell nenzira iyi kunogona kuisa mamwe maGNOME mapakeji akasiiwa nevakomana veUbuntu. Semuenzaniso, Nautilus. Chokwadi, pamwe ndizvo zvaunoda, saka pakadai panenge pasina dambudziko asi iwe unofanirwa kuziva izvo zvichaitika.
sudo yekuwedzera-apt-repository ppa: gwendal-lebihan-dev / sinamoni-yakasimba sudo apt kugadzirisa sudo apt kuisa sinamoni
sudo yekuwedzera-apt-repository "deb http://packages.mate-desktop.org/repo/ubuntu $ (lsb_release -sc) main" sudo yekuwedzera-apt-repository "deb http://repo.mate-desktop.org / ubuntu $ (lsb_release -sc) main "sudo apt kugadzirisa sudo apt kuisa mate-archive-keyring sudo apt kuisa mate-core mate-desktop-nharaunda
11. Isa iyo Compiz & plugins Kugadziridza maneja
sudo apt kuisa compizconfig-zvigadziriso-maneja compiz-plugins-yekuwedzera
sudo apt bvisa appmenu-gtk3 appmenu-gtk appmenu-qt
sudo apt kuisa appmenu-gtk3 appmenu-gtk appmenu-qt
Mahwindo emawadhi mubha remusoro
Pakutanga, mamenyu ekushandisa ayo asina kukwidziridzwa akaonekwawo mumenu yepasirese. Nekudaro, izvozvi zvave kugona kuti mamamenyu ari mumawindo aya aoneke mune yavo yemusoro bhaari. Kuti uite izvi, iwe unongofanirwa kuvhura iyo Dash, nyora "Chitarisiko", enda kune "Maitiro" tebhu uye sarudza sarudzo "Ratidza mamenyu ewindo mubha remusoro."
13. Bvisa kutsvaga "kwekutengesa" kubva kuDash
Kuti ndikanganise kutsvaga kwepamhepo, ndakavhura iyo dashboard Sisitimu Zvirongwa> Kuvanzika nechengetedzo> Tsvaga. Paunenge uripo, sarudza sarudzo "Sanganisira zvawanikwa pamhepo."
Kuti usabvisa chete "zvekutengesa" zvekutsvaga zvinowanikwa muDash, unogona kuenda ku Zvishandiso> Filter Mhedzisiro> Type> Kuwedzeredza. Dzvanya pane plugin uye sarudza Dzora.
Kumisa zvese zvinotsvaga "zvekutengesa" (Amazon, Ebay, Chitoro cheMimhanzi, Mapfumo Akakurumbira Pamhepo, Skimlinks, Ubuntu One Music Kutsvaga & Ubuntu Shop) mune imwe chete swoop iwe unogona kuvhura terminal uye uite unotevera kuraira:
gsettings set com.canonical.Unity.Lenses akaremara-zviyero "['more_suggestions-amazon.scope', 'more_suggestions-u1ms.scope', 'more_suggestions-populartracks.scope', 'music-musicstore.scope', 'more_suggestions-ebay .scope ',' more_suggestions-ubuntushop.scope ',' more_suggestions-skimlinks.scope '] "
Kuti nditange, ndakawana iyo dashboard Sisitimu Zvirongwa> Nhoroondo dzepamhepo. Kamwe ipapo, tinya pane "Wedzera Akaundi" bhatani.
Ubuntu WebApps inobvumira mawebhusaiti akadai seGmail, Grooveshark, Last.fm, Facebook, Google Docs, nevamwe vazhinji, kuti vabatanidzwe pamwe chete neUnited desktop: iwe unozogona kutsvaga saiti kuburikidza neHUD, iwe unogashira Notices dzedesktop, zvinyorwa zvinokurumidza zvichawedzerwa uye ichatobatana pamwe neyemeseji uye yekuzivisa menyu.
Kuti utange iwe unofanirwa kungoshanyira imwe yemasaiti akatsigirwa (pane runyorwa rwakakwana pano) uye tinya pane "gadza" pop-up, inozoonekwa sezvakaratidzwa mumufananidzo uri pamusoro.
Enda kuUbuntu 14.04 desktop dhairekitori
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Ubuntu 14.04 Trusty Tahr
Mhoroi, ndine PC ine Intel Pentium ye3.00 Ghz uye 2Gb yeRam. Ko Ubuntu 14.04 LTS inomhanya zvakanaka here? Ko zvakadii Kubuntu kana Xubuntu?
Kugona. Kana iyo Pentium yaunoshandisa iri mbiri-musimboti, iwe hauna dambudziko kumhanya Ubuntu uye Kubuntu; kana iri imwechete-musimboti; Ini zvirinani kukurudzira Xubuntu. Mufaro!
Pindura kuna Omar
Ndofunga kudaro. Saizvozvo, iwe unogona kuyiyedza kubva kune pendrive kuti uone mashandiro ayo uye kana ikaona yako yese Hardware zvakanaka.
Ndinokurudzira kuti uverenge: https://blog.desdelinux.net/como-instalar-linux-desde-un-pendrive-usb/
Pamwe fambisa zvishoma zvishoma mukoma
Carlos Sierra akadaro
Ichokwadi ndechekuti inomhanya asi ichinonoka, ini ndinokurudzira kuti kana iwe uchida Ubuntu inomhanya zvakanaka, zvingave zviri nani LUBUNTU inokurumidza pamashini ekare kupfuura XUBUNTU.
Pindura Carlos Sierra
Carlos M akadaro
Ini ndakatama kubva kuUbuntu 14.04 kuenda kuLubuntu 14.04 uye zvechokwadi mashandiro acho ari nani, iwo maviri ma2gbs anotaridzika kunge 4.
Pindura kuna Carlos M
ehe mukoma vanomhanya kwazvo
Iwe unongedzera Ubuntu 14.04 Saucy Salamander mundima yekutanga. Ndatenda neruzivo
Izvo zvinoitika nokukopa uye kunama ……… iyo posvo inokosheswa asi ikopi yeimwe… kwaziso
Mhoro! Ndatenda neruzivo. Ndatadza ndima yekutanga, ndatogadzirisa kare. 🙂
Uye hongu, yakafanana chaizvo negiraidhi yapfuura (kunyangwe iine shanduko) sezvo Ubuntu ichiri yakafanana, kana kwete? Kuchinja mutauro kwakatosiyana kubva pane imwe vhezheni kuenda kune imwe?
Kwete zvakanyanya, asi kana zvichikosha kuisa zvimwe zvinhu nezve izvo zviri kutaurwa nezvazvo, senge musoro wenyaya wepasi rose menyu izvozvi, mune iyi vhezheni graphic sarudzo inoita kunge ichichinja. Izvozvowo zvinokosheswa che!
Iyo ppa ppa: makson96 / fglrx haitsigire Ubuntu 14.04
Chaizvoizvo, ndine dambudziko uye nderekuti ndine PC ine hd3000 ati ine 13.04 uye ini handimutsiridze kusvika 13.10 nekuda kwekutsigirwa kweiyo ppa: / uye ini handizive zvekuita, pamwe chakanakisa ndechekudzokera ku12.04, handiti?
Juan Carlos Senar akadaro
Yangu Ati hd3450 inoshanda zvakaringana nemadhiraivha eflgrx andapihwa kubva Kuwedzera madhiraivha muMint 13 (Ubuntu 12.04). Ndaidzoka ...
Pindura Juan Carlos Senar
: O ndatenda nezano 🙂
Ichokwadi. Sezvandakakurukura pazasi, ini ndichangobva kugadzirisa icho chikamu cheye gwara
Kutenda kune iyo data!
Mangwanani akanaka, parizvino, iyo ubuntu tweak ppa haitsigire yakavimbika, uye kubvisa menyu yepasi rose kubva kumagumo haisi zano rakanaka nekuti parizvino inogona kuremerwa kubva mukumisikidzwa - chitarisiko - hunhu. Mufaro
Ikozvino yave kuwanikwa mu http://www.ubuntu-tweak.com iyo vhezheni 0.8.7 dzidziso inowirirana neUbuntu 14.04.
Kunyangwe zvakadaro, kuiswa kwe .deb package kunopa mamwe matambudziko ekutsamira ayo akagadziriswa nekumhanya mune iyo terminal $ sudo apt-tora kuisa -f -fix-isipo.
Mushure mekuita izvi, chirongwa ichi chinoshanda zvakanaka.
Ichokwadi! Kutenda nemupiro. Ini ndato gadzirisa chikamu icho chegwara. Parizvino, nzira yakakurudzirwa ndeyekushandisa iyo Yekuwedzera Dhirairi application, iyo inogona kuwanikwa kubva kuDash.
Mhoro Alvaro! Icho hachisi chokwadi. Menyu yepasirese haigone kuremara kubva ipapo. Inogona kungochinjirwa kune isina-kuwedzeredzwa windows, sekutsanangurwa kwayakaitwa.
Musiyano mudiki, asi mutsauko pakupedzisira.
Mhoroi, ndanga ndichiyedza Xubuntu 14.04 kwemazuva akati wandei izvozvi, uye ndinoshamisika kuti haisati yatambira chero zvigadziriso. Gadzira kubva kumagumo sudo apt-tora yekuvandudza && sudo apt-tora kusimudzira haina kukanda chero chinhu chitsva. Izvo zvinoitwa uye nguva, pasina kuratidza kuti kune mapakeji anowanikwa; pasina kupa kukanganisa. Zvinoita kunge zvisingaite kwandiri.
Kune rimwe divi, purindaini yangu haichazvimisikidza pachayo pandinoibatanidza. Ini ndinofanira kuzviita nemaoko uye, kunyangwe ichiisa nenzira kwayo nenzira iyi, zvinoita senge nhanho yekudzoka kubva kuXubuntu 12.04.
imwe nguva yapfuura ndakapedza kuiisa uye kana zvidzoreso (mashoma) zvabuda, asi ivo vakabuda ne apt-tora dist-kusimudzira yekuraira. Ini ndaizoisawo aptitude, ndichiwedzera sechikonzero chekuti inogona kutsvaga mapakeji nekukasira kwekutsvaga uye kusunungura mapoka ese pasina kusiya chero akasununguka mapakeji, sezvazviri pane yayo Debian mamaboard.
Hi Juan Carlos, Unoisa sei purinda? Ini ndinoisa madhiraivha uye pandinoda kupurinda ndinowana meseji ichiti ndinofanira kugadzirisa purinda. Mune vhezheni yapfuura yakaenda pasina matambudziko. Ini handisi kuwana mhinduro mune chero foramu.
Mhoro Ana: Iwe une printer ipi?
Sezvandambotaura, muXubuntu 12.04 yangu Epson sx125 printa yakagadziriswa otomatiki kana yakabatana uye iyo scanner (iri multifunction) yaifanira kuigadzirisa mushure mekurodha pasi 2 .deb mapakeji kubva kune Epson webhusaiti.
Pa Xubuntu 14.04 iyo purindaini haigadzirise kana yaiswa mukati (ndinovimba izvi zvichagadziriswa mune ramangwana rekuvandudza) uye ini ndawana nzira mbiri dzekuita izvi:
1.- Enda ku Menyu> Zvirongwa zvese> Hardware> Maprinta. Hapana chinoonekwa uye ini ndinodzvanya pairi Wedzera Printer. Kubva pano yatove kuwanikwa uye iwe unofanirwa kungoita senguva dzose Tevere, Enderera, nezvimwe. kusvikira kumagumo.
2.- Shandisa CUPS kubva kubhurawuza ichipinda mukero http://localhost:631/ uye uteedzere rairo sezvakaratidzwa pano:
Kana purinda yako iri HP zvinokwanisika (dzimwe nguva zvinoitika) izvo, sekutaura kwako, zvinoita kunge zvakagadziriswa zvakanaka uye hazvishande chaizvo. Mhinduro yangu ndeyekuisa iyo hplip-gui package ($ sudo apt-tora kuisa hplip-gui) wozomhanya $ sudo hp-setup uye tevera mirairo. Kazhinji yenguva inoshanda.
Ini ndinonzwisisa kuti iwe uri muArgentina, asi iwe unofanirwa kusiyanisa pakati pekuti unotaura sei uye nemanyorero aunonyora Zvinhu zvakaita sos = uri uye unoda = kuda, uye yakareba ect.
Ha, zvakandibatawo kuti akanyora seizvi ... chaizvo nekuti ndati, hei uyu muArgentina ... Ehe pane musiyano pakati pekuti unotaura sei uye nemanyorere aunoita ... asi kwete mune icho chinhu chechinhu icho chaunomaka, asi maererano ne "kunyora» ... ndinokuudza kuti isu maArgentina tinonyorawo neaya "madimikira» (kana chero zvavanodaidzwa) . Asi fungidzira kuti kunyangwe maYankees anofanirwa kunge achichinja madimikira avo kune avo veGreat Britain, kana maPeru, kana maMexico angave akafanana ....
Mhoro katatu m!
Ndinotenda mazwi ako asi zvinondirovesa kuti kuva muArgentina unozviona zvichishamisa kuona chinyorwa chakanyorwa seichi. Kunyangwe muLa Nación kana mune chero bepanhau muArgentina vanonyora seizvi.
Kune rimwe divi, ndinonzwa kugadzikana kunyora seArgentina, neangu "masisitimu", semablog mazhinji anochengetwa nemaSpanish mabloggi anoremekedza avo "enzvimbo" (vachikushandisa kunyora, semuenzaniso). Ini ndinokukoka iwe kuti unyore kwavari zvakare kuitira kuti vachinje nzira yavo yekunyora uye vasarudze "vasina kwavakarerekera" Spanish. Semuenzaniso, ini ndinokupa chinongedzo: http://www.muylinux.com/?s=ois
Che, zvinoita kwandiri kuti hauna kana chawakanzwisisa ... ndakarohwa nekuwana mumwe muArgentina, kwete kuti iwe umire kuzviita nekuti ndaifunga kuti kubva kuLinux akabva kuCuba .... asi zvirokwazvo ndinofara kuti iwe unonyora pamwe neyakajairidzwa (zvinova zvandakataura). Ini ndinowana fungidziro yekuti sezvo ini ndakaita "kutsoropodza" pamusoro, iwe waifunga kuti zvese zvandinotaura zvingave zvisina kunaka. Pane kupesana ... (ndinogona kunge ndakanganisa) asi kana zvisiri, handinzwisise kuti ungadudzira zvisizvo sei mazwi angu zvakadaro?
Uye izvo zvandataura mune inotevera chirevo kusarudza kwazvakarerekera Spanish kungozviisa munzvimbo yeumwe, nekuti semuenzaniso. Ini ndasuwa dzimwe nzvimbo dzeMexico… uye mushe… asi ndinodzokorora, zvaive zvakanaka kuwana iko kunyora muArgentina mune ino blog yaifungwa neCuba.
Iyi blog ndeyepasi rose. Isu tinonyora mumitauro yese yeSpanish.
Zvisinei, nenzira, ndinokumbira ruregerero kana chirevo changu chikunetsa, nekuti chaive chisiri chinangwa changu, kana kopi yapfuura yekuteedzera, ndizvo zvandaifunga, asi basa rese rinokosheswa.
iwe hausi wemunharaunda asi chimiro chekaresa.
«Iwe» «unodikanwa» zvakare emuno, asi peninsular, ini ndaizoshandisa «vari», «vanoda / vanoda», vevane kwazvakarerekera Spanish
hezvo …… zviwanikwa… Sep iyo yekuSpain yausina kwadzakarerera inodzikamisa munhu wese.
Uye kunyora uchishandisa "iwe uri" uye "iwe" uye zvese izvo hazvisi zvemunharaunda? Ndapota..
Ini ndinokukoka iwe kuti uverenge zvinotaurwa neRoyal Spanish Academy nezve nzira yandinonyora nayo Inodaidzwa kuti «veseo» uye inoshandiswa kuArgentina nedzimwe nyika: http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=iOTUSehtID6mVONyGX
Iyo haisi nzira isina kudzidza yekunyora kana iri "nzira yekutaura", inongova nzira yekuzviratidza kuti inogamuchirwa neRAE.
Sezvandakambokuudza kare: Ini ndinobvuma, asi ini ndinokumbira iwe ndapota kuti uverengezve, chaizvo komuredhi Mario anoti idunhu renharaunda.
Izvo zvinoitika ndezvekuti, kune vanhu vazhinji vanotenda kuti vanotaura "zvepamutemo" Spanish / Castilian uye, neupenzi, vanosarudzira vamwe vese. Neutral Spanish yakafanana neunicorn, ngano, iyo isipo chaizvo. Iwe ramba uchinyora nepese paunogona uye uchiregeredza aya "nyanzvi" mumutauro. Shanduro dzese dzeSpanish dzakanyatsoshanda, Spanish-Argentine inosanganisirwa, saka usakuudza neimwe nzira. Enderera neblog. Zvido.
Nehurombo, iwe wakanganisa. Iyi haisi "sekunge iri kutaura" nzira yekunyora, uye haisi iyo nzira isina kudzidza yekunyora.
Ini ndinokukoka iwe kuti uverenge zvinotaurwa neRoyal Spanish Academy nezve nzira yandinonyora nayo. Inodaidzwa kuti «veseo» uye inoshandiswa kuArgentina nedzimwe nyika: http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=iOTUSehtID6mVONyGX
Anodiwa Saeron, (kutanga kwezvose ini ndinojekesa kuti ini ndakaberekwa kubva kuMadrid, "katsi" yakanaka.
Iko kutaura kwako kuchiri kwakangoita nekolonialist, iine zvishoma stale whiff. Pinda iyo Panispanico Duramazwi rekusahadzika uye ujekese ivo.
Muboka revaCastilian-vatauri, maSpanish idiki subset uye hatina mvumo yekumanikidza chero chinhu, zvakanyanya isu takaisa ropa muLatin America kwemazana emakore.
PS.: Ndakagara makore makumi maviri nemasere muBuenos Aires uye tine zvakawanda zvekudzidza kubva kune izvo zvikamu.
Zvakanaka vagadziri veCinnamon vanovimbisa kuti sinamoni desktop haisi forogo asi yayo nharaunda xD
Uye nekuti? Kana iri forogo ... kana kwete?
Ndezvipi zvinoenderana nekutaura izvozvo?
Ini ndichangobva kuisa ubuntu 14.04 (yekupedzisira, kwete beta) uye ini handizive kuti sei asi kubvira vhezheni 10.10 ubuntu yave kudaro, inononoka, sezvo ndichishandisa kubatana, windows hang nezvose, ndinobvuma kuti iyi vhezheni 14.04 inokurumidza , asi ini handizive asi zvinondisungirira kwete zvakanyanya senge muna13.10 na13.04, chaizvo. Ini munguva pfupi yapfuura ndakadzokera kufedora ndikagara muXFCE fedora 🙂
Chii chaunofanira kuita mushure mekuisa ubuntu 14.04 trusty tahr?
fomati uye isa arch linux: p
Jua! Zvakadaro, iyi vhezheni yeUbuntu haina kushata zvachose ... haina kugadzikana (zvichienzaniswa neyavambo).
Kana yekutanga OS, Linux yakanaka chaizvo.
Rafael Mardojai akadaro
Hee hee hee… ._. Kana ndiri kuenda kuisa Arch, ini ndoda kudzokera kumahwindo uye ndogara kwehupenyu xD
Ndino funga kuti iwe unoverenga kuti iyi nyowani vhezheni yeUbuntu inouya neLibreOffice 4.1.Kubva vhezheni 3.6 uye yakagadziridzwa kubva mushanduro 4.x madhivhidha akajairika emutauro uye zvirevo zvakaiswa muchirongwa.
Kugona! Kutenda nemupiro!
Kungorangarira kuti hazvichadiwe "apt-tora" kuisa nemamwe maitiro, ikozvino ingo nyora rairo "apt"; semuenzaniso, "sudo apt bvisa Spanish-idiom" (hehe, irikuseka, usagumbuke).
Ernesto Flores akadaro
Mhoro munhu wese:
Kwidziridzwa sezvakaratidzwa pano, asi chinhu chega chandisingade kutanga nacho ndechekuti iyo Audacity vhezheni (2.0.5) yeiyi distro uye yevamwe, haigamuchire emuno maLinux plugins akadai seLADSPA, LV2, DSSI, nevamwe izvo zvaiwanzo kuverengerwa kana uchigadzirisa plugins neSoftware Administrators. Zvirinani ini handizive maitiro ekuvatonga neimwe nzira. Makomendi ayo anogona kubatsira kune ino kesi anokosheswa pamberi.
Pachokwadi: Ernesto Flores
Pindura kuna Ernesto Flores
ingo kupa kuti APT yagadziriswa, haichisiri sudo apt-tora kuisa asi sudo apt kuisa.
vhezheni itsva yeAPT paDebian uye Ubuntu: http://rootsudo.wordpress.com/2014/04/20/nueva-version-de-apt-en-debian-y-ubuntu/
Pindura kuna Essaú
Ndizvozvo! Ndeipi tsika.
Mhoroi, maita basa nemupiro uyu. Ndinoda kuziva maitiro ekuisa madingindira uye nekuchinja iwo maitiro kuUbuntu. Ini ndichangobva kuisa 14.4. Ndiri noob.
Yakanaka gwara sekugara Pablo 🙂
Zvinotaridza kwandiri kuti iyi vhezheni ndeye mutsivi akakodzera kunyatso, zvirokwazvo chete xfce vhezheni yake, nekuti kubatana kunokundikana kupfuura pfuti yeXD yepasirivhorivhi. Mhosva chete yandinoona ndeyekuti awn haisi munzvimbo dzekuchengetera (kubvira beta) hapana chausingakwanise kugadzirisa nemasekondi gumi mune iyo terminal = ^. ^ = Asi ipapo ndinosiya chirevo ò.ò
Ini ndinokurudzira zvikuru xfce kwete chete kune kwayo kureruka uye kusimba, asiwo nekukwirira kwayo kumisikidza. Kubatana hakuna kumbobvira kwandikurudzira / kufarira / kushanda saka ini ndinopasa iyo = ^. ^ =
PS Ndinovimba vanokwanisa kugadzirisa account yangu nekuti hazviite kuti nditaure naye, ndinogona kupinda asi kana ndichiedza kuburitsa chirevo changu zvinondiratidza kuti handina kupinda muTT ndanga ndakaita seichi kwevhiki dzinoverengeka uye neshungu ndinoona kuti hapana komendi yakatsikiswa yangu kubva ipapo TT
Pindura kuna Mordraug
Iye zvino ndinogona kupinda kuti nditaure neaccount yangu, ndinofungidzira kuti kukanganisa kwanga kuri kwangu XD ... kana account yangu ine OO
Kugona! Ndiri kufara kuti dambudziko rakagadziriswa. 🙂
Zvakanaka kukuona uchitenderedza Saito.
Iyo Unsettings repository haishande, yeshanduro 13.10 ... haina kushanda kana.
Uye chinhu chimwe chete ichi chinoitika neCinnamon ... matura haashande, usavawedzera.
Kana paine munhu ane chaicho, ndapota… pfuudza iyo data. Ndatenda!
Pane chero munhu ane matambudziko nekutsvaga mudhidhi? Ini handikwanise kuwana mitsva yekutsvaga online, kubva kumawebhusaiti akadai seWikipedia kana Deviantart, pachinzvimbo zvimwe zvese zvinoshanda (mavhidhiyo, mifananidzo, zvemagariro)
Zvakanaka, pachangu, uyu ubuntu wakabuda zvirinani pane iwo aibuda, ndinoreva, ndeye LTS yechikonzero, zvisinei, ini handizive nezve vamwe, asi ini ndaive ndichine matambudziko, uye izvozvi ne linux mint zvinoita sekunge inoshanda kwandiri. Hazviratidzike kunge zvakavakirwa pahunhu, asi pasina kupokana iyi dzidziso yakanaka, kunyanya kune avo vari kungopinda mune linux neiyi ubuntu LTS
Mhoroi, zvese zvaenda zvakanaka, asi pane chinhu chimwe chandisingakwanise kuwana uye ndiko kuisa sopcast .. Ndakatarisa muzvitoro asi zvinogara zvichindipa kukanganisa… Ini handisi mugadziri weUbuntu, ndingafarire chero munhu. ndiani angandibatsira.
Ndakave nedambudziko rakafanana newe. 🙁
Ini zvakare ndakanga ndisingakwanise kuiisa pane yekare vhezheni yeUbuntu.
sudo apt kuisa compizconfig-zvigadziriso-maneja compiz-fusion-plugins-yekuwedzera
Ini ndinowana E: Iyo compiz-fusion-plugins-yekuwedzera package haigone kuwanikwa
Zvinotaridza kuti pasuru yacho yakapihwa zita zvakare. Edza IZVI:
sudo apt kuisa compizconfig-zvigadziriso-maneja compizplugins-yekuwedzera
Isaka 98 akadaro
Mhoroi, ndakafara kwazvo neruzivo rwuri mune ino gwaro ku ... mubvunzo ndewupi vhezheni yaunokurudzira palaptop yangu neIntel Core i3 pa2.4 GHZ / ini ndinokumbira kudzivirira kukundikana mune imwe OS X TIYEDZE KUSHANDISA YEMAHARA SOFFWARE LET US USE LUX
Pindura kuna Isaac 98
Hei ndapota ndipindure, huri sei ubuntu? unozvikurudzira kwandiri? Ndaneta neArch uye nemhosho dzake, ndinoda chimwe chinhu chiri nyore, batsira!
Kana iwe uchibvuma iwo maonero eedu isu varipano uye vatoshandisa linux-ubuntu !! Nditende kuti ndiyo yakanakisa iwe yaunogona kupa muchina wako uye hutano hwepamoyo hwaunogona kuzvipa, ini handina kungoora mwoyo (uye kupererwa) nemahwindo, zvakandipengesa pese pandaifanira kumomeshina muchina wangu nekuti wainonoka kana chimwe chinhu. ndakauya, kunyangwe ndichizvishora uye ndichitarisa zvikanganiso (zvaityisa nekuti kuzviita mazuva ese gumi nemashanu zvakaitika zuva rega rega), ini ndaive ndichine matambudziko, ndoda kungobhururutsa internet, ndine gumi tabu yakavhurika kana mashanu windows ane akati wandei tabu yaive rufu for my pc, yaipisa zvinotyisa, kusvika yarohwa nechando ndokuvhara ZVESE !! My Lap was recent, it was about 15 months new, izvo zvandaitarisira pazvainyanyo shanda, nerombo rakanaka ndakasangana nemunhu akaisa ubuntu munzira yangu, uye HUPENYU nemakumbo angu sezvo ndaiziva kuti ZVAKAITIKA zvakachinja, neububtu inoita chaizvo Kukwanisa kwemakumbo ako, une madhesiki akasiyana uye iwe unogona kushanda akasiyana mapurojekiti mune yega yega, unogona kugadzira lap rako kunyatsoita uye kushanda padanho raunotarisira, pachezvangu ndinoda mufananidzo waro zvakanyanya, zvine hushamwari kuchinja iyo kuenda kune zviwanikwa nemaapps uye ekuwedzera ayo aanogadzirisa uye akanakisa pane ese, kune nharaunda yakakura kwazvo yatinogona kutsigirana. Saka EHE, UBUNTU inokurudzirwa zvakakwana, chinhu chete chaunoda kusimbisa mashandiro ayo zvakanaka uye kune izvi kune akawanda mablog.
Pindura kuna Chivabvu
Kuzvidzora uye kutarisa zvikanganiso (izvo zvaityisa nekuti kuzviita mazuva ese gumi nemashanu zvakaitika zuva rega rega …….
hahahahahaha Ndingadai ndakaidzorera sechivimbiso kana zvakaipa zvakanyanya kuti ini handina fomati mahwindo angu manomwe pc kweanoda kuita makore matatu uye zvinondishandira zvizere ndine mazana maviri emitambo yemavhidhiyo yakaiswa uye akati wandei zvirongwa saka handifunge windows ndidzo dzakaipisisa zvinoitika kuti kune vanhu vane mafungiro echapupu chajehovah vangade kushandura munhu wese nenyaya yavo ye linux .. zviri nyore kupa zvinotevera uye kubvuma kuti iyo console tsvaga yezvakachengetedzwa mirairo nezvimwe nezvimwewo zvakadaro nepo windows rezenisi rinogona kubiwa uye iyo iyo imwe software uye mitambo yemavhidhiyo zvakare ... tichava nemahara software hehehehehe
Ini ndatevera iwo mirairo kusvika kune iyo yekadhigirafu kadhi mutyairi asi ini ndaifanirwa kubvisa iyo yekudyira mutyairi uye kudzorera iyo yemahara kumashure nekukurumidza pandakanga ndawana mukana (uye zvakanditengera ini).
Dambudziko randaive naro mushure mekumisikidza iro repamutemo raive rekuti, paakatanga, zvaiita sekunge chidzitiro chiri muUbuntu chakachinjira kurudyi ndikawana mitsetse midiki yakatwasuka. Zvese izvi hazvina kana kunditendera kuti ndiende kana kunditendera kuti ndiwane dhi kana chero chinhu kuti ndidzokere kumagadzirirwo ekutanga. Ini ndaifanira kurwa ne "safe graph mode" uye yakandipa zvimwe kana zvishoma matambudziko akafanana, yaive mushure mekutanga patsva kanoverengeka iyo yakandibvumidza kuti ndichinje zvakare uye ikozvino inoshanda zvakajairika.
Chinhu ndechekuti sekuda kwangu kutora mukana weiyo mifananidzo muUbuntu, ndinoda kuwana kiyi yekugona kuitanga zvakajairika ... iyo modhi i AMD Radeon HD 7670M, ndakaedza zvese neiyo fglrx uye ne fglrx-inogadziridza uye zvese iri dambudziko rimwe chete. Chingave chinhu cheUkubatana chinhu? Pamwe dai ndikaedza Ubuntu Studio kana Xubuntu hazvaizoitika, handina chokwadi.
Iyo modhi yekombuta ndiToshiba Satellite L850 (ehe, inouya neEFI ... asi chikamu icho chandakagona kugadzirisa).
Kana uchikwanisa kundibatsira neizvi, ndingafare zvikuru.
Mhoroi, iyo Cinnamon PPA haisi 64-bit 🙁
Mhoro ferr! Kutenda nekujekeswa!
Ini ndichaiwedzera pambiru.
Ini handina kukwanisa kuita Popcorn nguva kufamba chero 😛
Manheru akanaka, ini ndaida kuona kana paine munhu anogona kundipa ruoko nenyaya iyi. Ini ndinotaura pane zvakaitika kwandiri ...
Isa Ubuntu 14.04 pamawindows 8 pane yangu nyowani sony vaio muchina. Dzima UEFI nekuchinjira kune Legacy bhuti. Sezvo ini ndisingakwanise kudzima chengetedzo boot probe, tarisa kana Ubuntu ichizivikanwa mune yekumisikidza kuti paive neimwe inoshanda system. Ndiwo mafambiro azvakaita. Wobva waenderera nekuiswa kweUbuntu pasina matambudziko.
Mushure mekutangazve muchina ini ndinoona kuti mune mbiri skrini umo kwandinogona kusarudza iyo inoshanda sisitimu yandinoda, ini ndinogona chete kutanga Ubuntu.
Ndingagadzirisa sei izvi uye ndoda kutanga windows 8?
Mhoro shamwari ngatishandise linux
Mazhinji maGrax emupiro akazara kwazvo, ndine mubvunzo, pamwe haufambe zvakanyanya nenyaya asi ndinovimba munogona kundibatsira. Ini ndoda kushandura mavara mumabhawa nekutsikisa kwavo (menyu bar yakavanzwa) asi chandakawana ndechekuti zvinoitwa musystem> chitarisiko…. asi sarudzo iyoyo haioneki kwandiri, hapana kutaridzika musystem yangu, handizive kana iri yekuda kurodha zvishandiso uye tweak, asi mushanduro 12.04 ndakanga ndisina dambudziko nazvo, chitarisiko ichochiripo. Ini handizive kuti sei asi kunyangwe muhurongwa> ruzivo kwazvinofanira kutaura ubuntu 14.04 inoti ubuntu 13.10 WTF ??? !! asi mune iyo koni inotaura kuti zviripo ndakaisa 14.04…. Pamwe iwe unogona kunditungamira, ini ndichakutenda zvakanyanya !! Zuva rakanaka!
Kutenda kune iyo info!
Komputa yangu i100!
Pindura kuna Kalinosblogger
Mumwe munhu angandibatsire kuti ndiwane sei ino yekushandisa system kubva pc yangu pasina kuikanganisa, ini ndaive ndakaisirwa
Zvakanaka ini ndakatanga nemaLinux anoshanda masystem uye ini ndine yakaipa chiitiko.
Ngatitangei: Ndine matatu maPC, IBM Pentium 3, asus uye amd3. Pipermine, Fedora, Ubuntu 64 haina kundishandira, uye nhasi ndaedza KUbuntu, hapana kana rimwe rawo rakashanda, nekusiyana rakatyora maPC angu. Mune imwe ini ndakaisa Ubuntu uye ndaifanirwa kuimisa kuti ndikwanise kubvisa zvine musoro kurasikirwa nedata reimwe inoshanda system.
Ini handikwanise kutsanangura dambudziko nekuti harina kana kushanda, iyo pc inosvinwa. parutivi ndinofanira kutangazve kuti iite kuti ishande zvakare.
Rubatsiro runenge rwusina kana kana chinhu, ini ndakanyoreswa muUbuntu forum muSpanish uye kusvika parizvino handina kugashira.
Vanoti rakavhurika sosi ini handioni chero cheizvozvo, nekupesana zvinoita sekunge rakagadzirirwa mamwe mapoka, haina mukana wekumisikidza, zvisingaite nekuda kwemitauro yakasiyana zvachose, kune ese epasirese atinonzwisisa tese.
Ini pachangu ndakazviedza nekuti zvakabata yangu yemahara kutarisisa, izvo zvisiri zvechokwadi zvachose.
Marcos, usataure zvishoma. Chinhu chekutanga chandinofanira kutaura ndechekuti havazi vese vane ruzivo rwakafanana neGNU / Linux, nekuda kwenzvimbo yavo yeruzivo, kushivirira uye Hardware yavanoshandisa.
Hapana OS inoputsa PC, kana zvishandiso zvedu: Ndisu. Dambudziko riri pakati pecheya nekhibhodi. Zvino, hazvishamise kwazvo kuti pamakomputa matatu akasiyana, aine Hardware akasiyana, mana akasiyana ekuparadzira haashande. Iwe une chimwe chinhu chakafanana maererano nehurdware mune ese iwo? Nekuti izvo zvazvino AMD zvigadzirwa hazvishande 3% ini ndinonzwisisa, asi vakuru vacho vanofanirwa kuve nerutsigiro.
Kwete munzvimbo dzese dzaunowana rubatsiro uye zvakajairika, nekuti hazvisi zvekumanikidzwa kuzviita, zvakadaro, ndinokukoka kuti ushanyire yedu foramu kuti uone kana iwe uine rombo rakanaka.
Kugoverwa kwese iwe kwaunotaura kwakavhurwa sosi, kana angangoita 95%, asi ini handinzwisise zvawaitarisira kuwana kana zvawaitarisira kuita nekuwanikwa kwekodhi yekodhi. Unogona kunditsanangudza here? Iwe unogona zvakare kundiudza izvo OS ine uninstall sarudzo? Unorevei nemitauro yakasiyana?
Uye ini ndinodzokorora, kana vakasununguka, zvirinani kupfuura Windows uye OS X.
Kuseta hakuna kuisa.
Matanho maviri ekutanga akanaka, echitatu haana. Chichava chii?
ruzivo rwakanaka sei
Mhoroi, pandakasangana naUbuntu (muna 2010-2011) ndakaiisa pane Acer 3680 Laptop uye yainonoka. (Ini ndinofunga zvaive nekuti ndanga ndaiisa newubi) kunze kweLaptop yakashata yaive ne128mb yevhidhiyo uye 512mb yegondohwe neIntel Pentium M single-core processor, ikozvino ndine Linux Mint 16 (Mate) yakaiswa pane Dell Latitude D351 Laptop iine 3gb yegondohwe (2,8gb chairo), AMD turion processor (mbiri musimboti), 256mb ati giraidhi kadhi uye inomhanya zvine mutsindo, kunyangwe ichikiya kashoma.
Ndinoda kuziva kuti iyi ubuntu inogona kundimhanyira here kana kuti inogona kundirovera (Ndakaverenga kuti makadhi eATI haana kutsigirwa kana chimwe chakadai).
Kwazisai uye nekutenda nemhinduro.
Ini ndinozvipindura, ndangoisa uye inomhanya zvine mutsindo (inorembera kashoma).
Ini ndichangobva kuisa ubuntu pane compaq presario v5000 zvese zviri kufamba mushe chinhu chakashata ndechekuti haina kuona waya asina waya uye ini handizive maitiro ekuisa dhivha iyo kadhi iri Broadcom bmc4311
Ini ndichakuudza maitirwo azvo, (ini ndiri wechiGalician uye ndine buntu muGalician, saka mazita andinokupa anogona kunge asina kunyatsoita)
Parutivi penguva, iwe une menyu uko bhatani rekudzima riri, unoipa uye wosarudza "System Preferences"
Paunenge uchinge uri mukati, sarudza "software uye zvigadziriso" uye wozopedzisira wasvika yekupedzisira tebhu "yevanotyaira varidzi" uye ipapo inokuudza kana iwe uchida kuisa vatyairi veBroadcom.
Mune Asus X50R ini ndaive nedambudziko rakafanana (Broadcom bcm4311 kadhi). Iwo anotyaira STA madhiraivha andakapihwa nehurongwa haana kushanda saka chinhu chake KUSA KUVASIMBAI kana kuvasunungura ne:
$ sudo apt-tora kuchenesa bcmwl-kernel-sosi nhepfenyuro-sta-yakajairwa nhepfenyuro-sta-sosi
Uye wozoisa mapakeji:
$ sudo apt-tora kuisa b43-fwcutter firmware-b43-inosimudzira
Pakutangazve, iyo wifi yaive ichishanda.
Ichi chinyorwa hachishande:
sudo yekuwedzera-apt-repository ppa: gwendal-lebihan-dev / sinamoni-yakasimba
Ndatenda nekuisa kwako
nhanho dzekuisa Cinnamon hadzishande, idzi dzakafamba neni
sudo yekuwedzera-apt-repository ppa: gwendal-lebihan-dev / sinamoni-husiku
sudo apt-tora kuisa sinamoni
Mhoroi, une mirairo yese isiri iyo, haina kukodzera asi apt-tora.
Zvakanaka, zvese "apt" uye "apt-tora" zvinondishandira. Mune ino yazvino vhezheni yeUbuntu unogona kushandisa zvese ...
Mhoro. Ndakafarira tsamba yako.
Ini handina kushandisa linux kwemakore manomwe uye nhasi ndadzoka neUbuntu 7. Zvinhu zvachinja zvakanyanya.
Pandanga ndichiverenga, ndakaona kuti iwe wakangonyora "apt kuisa" uye kwete "apt-tora kuisa" sekurangarira kwandakaita. Ipapo ndakazviedza uye zvakanyatso shanda. Shanduko iyi yakaitwa riini? Izvo zvakasiyana neakakodzera-kuwana kana kukodzera?
Mhoro kuyedza ubuntu hwangu 14.4. Zvakanakisa
RUTSVAKA RUVARA akadaro
Ndatenda zvikuru nekutungamira kwako kwekuzvipira.
Ndatenda kwazvo, hapana chakaita senge yakanaka uye inoshanda posvo!
alvaro garcia isordia akadaro
Kugadziridza kana Kuvandudza kune ino Ubuntu 14.04 Trusty Tahr inoshanda sisitimu iwe unoda iyi mirairo sudo apt-tora yekuvandudza uye sudo apt-tora kusimudzira
Pindura kuna alvaro garcia isordia
Mhoroi, ndingaite sei kuti ndishandure iyo .zip yekuwedzera kune .otx mu ubuntu?
Ini nguva pfupi yadarika ndakamira kushandisa windows uye ndachinjira kuubuntu, dambudziko nderekuti ini handikwanise kuisa duramazwi reSpanish uye autocorrector ku libreoffice, nekuti inongotora kurodha yakatsindirwa mu zip.
Akanaka kwazvo mutungamiri, ndatenda. Ini ndinotora uyu mukana kukuudza kuti iyo Unsettings chirongwa chekugadzirisa Ubuntu neUniity chinogona kuwanikwa pakero iyi:
Munyori anojekesa kuti chakaitirwa shanduro dzekare dzeUbuntu uye kuti chinzvimbo chayo Beta. Kuti chero kumisikidzwa kuri panjodzi yemushandisi wega wega anoiisa.
Ndakaiisa ne gdebi uye zvese zvinotsamira zvakagadziriswa saka ndakazviisa ndikamhanya uye zvakazviita pasina matambudziko. Ini handisati ndambochinja, saka handigone kukupa iwe ruzivo nezve aya marudzi ezviwanikwa-
Ndine dambudziko neXubuntu 14.04: compiz haishande.
Ini ndinoisa nekugadzirisa zvese sekugara kwandakaita, uye kana ndichitangazve iyo X kana iyo system, compiz haingoshandi uye dzimwe nguva ndinowana meseji yekuti Compiz yakavharwa zvisingatarisirwi uye inondipa sarudzo yekuvhurazve kana kuramba yakavharwa.
Ini ndatoenda ipapo kubvira Xubuntu paakabuda uye ndisina kuwana chero chinhu chinobatsira, zvese zvandakawana magwara ekuisa compiz mune zvekare shanduro, asi hapana chine chekuita nenyaya inobata komputa yangu.
Ini ndinotumira izvi pano kuitira kuti chero munhu ave nedambudziko rakafanana. Kunyangwe zvisiri zvechokwadi kuti compiz yakakosha kwandiri, asi kuti ndiyo chete nzira inoshanda yandave nayo yekuti kubvarura kwangu tarisa kunyangarika.
Pasina chimwezve chekutaura, ndinotenda kutarisisa kwako.
Zvakanaka post!, Unoziva chero webhusaiti inoti inowirirana ATI / AMD mifananidzo kana iyo inoshanda mushe mu linux? (Kuti vane rutsigiro uye vanoshanda zvine mutsindo)
Zvakangonaka, ndatenda zvikuru
zvinoitika ndezvekuti ini ndoda kuisa ubuntud palaptop yangu ine 2 gb yegondohwe 1 ghz asi ine mbiri musimboti ichandishandira
Yakakwana, yaive yakanaka!
Alberto Acevedo akadaro
Pindura alberto Acevedo
Mhoroi munhu wese, ini ndakaverenga akawanda emakomendi, chokwadi ndechekuti ini handisi guru mune idzi rima hunyanzvi hweUbuntu, asi zvakabata pfungwa yangu kuti iwe unogona kusarudza pakati peGnome Flashback neUbatanidzwa kubva panhare yekupinda, asi ini handina kugutsikana neizvozvo chete, saka ndakaisa Gnome 3, sezvo mitsara inotevera yakataura kuti, ikozvino dambudziko nderekuti Ubuntu Tweak haichashandi uye chimiro changu dzimwe nguva hachiratidze zvinhu zvese senge chekiBox uye kana kuyedza kugadzirisa kubva kunovandudza maneja Ini ndinowana kuti kune asina kunaka mapakeji kana asisina basa ppa's uye kuti ini ndinogona kuita zvishoma chikamu uye kana ndikaipa iyo kuti ienderere mberi inondibvunza ini kudzoreredza akawanda mapurogiramu andinayo muUbuntu zvakare, nei zvakadaro? Ndingave ndichiri kuve nekubatana neGnome3? Ini ndichafanirwa kusarudza pakati peimwe yeaya maviri? …. Ndatenda zvikuru nemupiro uye ndinovimba chaizvo munogona kundibatsira
Desiderio Goyen akadaro
gwara rakanaka kwazvo
Pindura kuna Desiderio Goyen
Mhoroi, iri gwaro reUbuntu Gnome? ndine urombo asi ini handisi nyanzvi ye linux. Ndatenda.
Kwechinguva ndakave nekunyanyisa kwakanyanya kwekutengesa kwepamhepo uye kushambadzira kwemakwikwi, ini ndave kutosvika padanho rekutadza kuvhura hwindo pasina chinhu chinoonekwa.
Izvo zvese nekuti kuti ndiite joomla kosi, ndakavhura madoko kana chimwe chakadai uye ikozvino handina zano rekugadzirisa. Ini handichakwanise kubata nemaTrojans futi uye sezvamuchaona ini handina kunyatsodzidza munyaya iyi.
Iwe ungandiudza here kwandinoenda kuti ndizvigadzirise?
Ndatenda zvikuru nekutarisisa kwako uye nenguva yako!
Izvi zvinoitika kwauri paLinux kana Windows?
Iyo inotungamira yakanakisa kwandiri kuti nditsvage paUbuntu.Ndinoronga kuenda kuiyo shanduro 14.04.
Mhoroi, ini ndoda rubatsiro nekukurumidza sezvazvinogona, dambudziko nderekuti mirairo haishande kwandiri, ndinogara ndichiwana /// E: Dhairekitori rehutongi (/ var / lib / dpkg /) harina kuvharwa, pamwe pane imwe nzira yekuishandisa ?
Ini handikwanise kushandisa iyo ubuntu software centre
Pd: exp yangu mu ubunto ndeye = 0
Ndizvozvo ... iwe ungangodaro uchimhanyisa yekuvandudza kana kuisirwa kwepakeji uye iwe unocheka iyo inomhanya kune chimwe chikonzero. Neichi chikonzero, dpkg inova "dzungu." Izvo zvaunofanirwa kuita kudzima iyo / var / lib / dpkg / kukiya faira nemirairo inotevera:
sudo rm -f / var / lib / dpkg / kukiya
Hugo Ramón Arzamendia Rodriguez akadaro
Mangwani akanaka. Mushure mekuisa iwo ekuvandudzwa Ubuntu haandivhure, zvinoita sekunge nhema pachiratidziri, izvo zvandinoita.
Pindura Hugo Ramón Arzamendia Rodriguez
Yakanakisa mupiro kune avo vedu vari kutanga kufamba nenyika ino
Pindura kuna karyn
Mhoroi, ini ndaona kuti mune ino positi iwe unodzidzisa maitiro ekuwedzera echitatu-bato repositori, asi ini handina kuona kuti inoyambira nezve kuchengetedzeka uye kugadzikana njodzi kune anoshanda masisitimu eichi chiito.
Ini handisi nyanzvi yeIT, asi ndakarairwa kuti ndirege kuisa ppa, nekuti zvese zvisimo muUbuntu software Center zvinogona kukonzera matambudziko.
Ndinoda kuziva mafungiro ako, ndatenda
Pane pepa njodzi iripo. Asi kana avo vanochengeta iyo PPA vari vavandudziri vakavimbika, panenge pasina dambudziko. Nekufunga kumwe chete, kurudziro yangu ndeyekushandisa maPPA zvishoma. Izvo hazvisi zvekudzivirira kushandiswa kwayo asi ndezvekushandisa zvine mwero uye zvine hungwaru kushandiswa.
Kune rimwe divi, ini handizive nezve chero munhu akatapukirwa nemavirusi kana malware kubva kushandisa PPA.
Ndatenda kwazvo neruzivo zvinobatsira kwazvo
Pindura kuna Celso
Alonso AR akadaro
Ini ndiri mutsva kubuntu uye ndanga ndichiedza kazam asi ndine matambudziko ekuridza mavhidhiyo mune mamwe masisitimu anoshanda senge android kana windows, nei izvozvo zvichiitika kana ndikavarekodha mu mp4? ndatenda nerubatsiro rwenyu
Pindura kuna Alonso AR
Ndinoda kuziva kuti ungachinja sei hunhu kana uchidzvanya pahwindo. Ndokunge, nekumisikidza kwekumisikidza, kudzvanya kaviri pahwindo kunowedzera. Uye izvo zvandinoda kuita kuidzikisira nekudzvanya kaviri. Mune mamwe mavhezheni eUbuntu ndakazviita asi ikozvino handicharangarira kuti zvakaitwa sei uye handisi kuzviwana chero kupi.
Jose Pablo Ramos akadaro
Ndatenda zvikuru nekutora nguva kutsanangura zvese izvi, kwenguva yakareba ndaida kuisa Ubuntu pamushini wangu asi zvainge zvakandiomera uye wakandipa mega rubatsiro, maita basa!
Pindura José Pablo Ramos
Mhoro shamwari, ziva zvakanaka kuti ndafunga kuongorora nyika yeLinux, nezvikonzero zvekunyaradza handishandise Ubuntu, asi ini ndakazoziva nezve Elementary uye kusvika zvino zvakanaka, asi ndinonzwa sekunge zvinononoka, ngatiti zvinorema yePC yangu, ndinoshandisa Elementary 64BITS, 4GB ye RAM, Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz × 2; VIA Technologies, Inc. CN896 / VN896 / P4M900 [Chrome 9 HC] (rev 01) uye 120GB yedhisiki rakaomarara, chimwe chinhu chinoita kuti zviite zvishoma ndingati: / uye mumwe mubvunzo wakanaka kushandisa iyo 64 BITS kana ini ndichipasa kusvika ku32BITS? Ndinovimba handitaure munzvimbo isina kukodzera asi kune vashoma Elementary blogger uye ndinonzwisisa kuti Elementary yakavakirwa paUbuntu, saka zvave zvakafanana mukati, ndinofungidzira.
Ndiri mutsva kunyika yeLinux, uye ndinoda kubvunza mubvunzo.
Ini ndashandisa Linux Mint uye ini ndaifarira maumbirwo ayo uye izvo! Asi pandakaisa Ubuntu nekuti zvinoenderana nezvandakanzwa kuti kugoverwa kwaive nani (handigone kutonga kuti ndiri newbie), zvakanaka ndakaiisa uye zvinozoitika kuti zvese zvakanaka chose asi Gnome iyo Ubuntu inounza uye ini handinzwanane.
Mubvunzo ndewokuti: Kana ini ndikaisa Cinnamon inova iyo interface ine Linux Mint, ko iyo desktop uye iyo LM Native menyu ine zviratidzo?
Cod Mukadzi (ndapota handisi spam) akadaro
Haisi SPAM ¬¬: Mhoro. Ndiregerereiwo nezvekuburitswa, uye ruregerero avo vanonzwa kugumburwa neichi chirevo: Ichokwadi ndechekuti ndine matambudziko ekuvandudza, nekuti zvinondiudza kuti dura remasaini harina kuvandudzwa uye peji randaifanira kuvabvisa rinoti harina makiyi inowanikwa. Iko kukanganisa kwangu kune iyo GPG uye iyo multimedia dhidhi peji
Mamwe mafaira index akakundikana kurodha pasi. Iwo akaregeredzwa, kana mamwe ekare akashandiswa pachinzvimbo »
Ndinoziva kuti ndinofanira kuchinja uye kugadzirisa izvi mune zvinyorwa, asi handizive kuti sei. Ini ndatevera mirairo pamapeji mazhinji, asi chokwadi ndechekuti ini handinyatsonzwisisa, uye ini ndatova nezviitiko zvakashata uye ndaifanira kumisazve. Ehe. Ndinoziva kuti ndizvo zvaunodzidza kubva; Asi pane rimwe dambudziko: komputa ndeya wechidiki asina chaanoziva nezveUbuntu, uye vabereki vake ndevamwe vevanhu vanotenda kuti kana komputa iri mukumiswa inyaya yekuti chimwe chinhu chakakomba chakaitika kwaari. Ndibatsireiwo. Ini handisi nyanzvi, asi ndinoshandisa komputa iyi. Uye ndinokumbira ruregerero zvakare nekukonzera iwe kusagadzikana kwekuona.
Pindura Bacalao Mukadzi (ndapota handisi spam)
ndosaka windows iri akanakisa
Linux inogona kushanda zvikuru pamaseva asi kune mushandisi akajairika iri kuvhiringidza uye nenyaya imwechete iyo yatove inofinha kuti haudi antivirus ivo vanofunga kuti vagadzirisa zvese.
Iwe haudi deb-multimedia repos zvachose, nekuti zvese zvakatoverengerwa munzvimbo dzepamutemo, kunze kwezviitiko chaizvo (zvehunyanzvi maturusi ekuridza asina kuiswa mune yako distro zviri pamutemo) haudi iyo repository.
Zvakare pane yepamutemo deb-multimedia peji ivo vanotsanangura mushe mabatiro enyaya yako, kuisa iyo package inoenderana nekodhi repamba kiyi.
Fred cespedes akadaro
chakanakisa mupiro… Ini ndichangobva kuisa ubuntu 14.04 lts uye inomhanya chaizvo paDell pc ine chete 2g yeRam
Pindura kuna Fred Cespedes
Manuel Ch. akadaro
Mupiro wakanaka kwazvo. Ndotenda zvikuru.
Pindura kuna Manuel Ch.
Mhoroi, ini ndawana iyo ruzivo kupedzisa kuisa Ubuntu inodzidzisa kwazvo, ndatenda neruzivo. 🙂
Ndinotenda mutambi wenyaya ino, nekuti tsananguro dzake dzave dzakanaka kwazvo kwandiri.
Ndinokukorokotedza nekunyora kwako, nekuti kunyangwe hazvo nyika yako ichinzwisiswa, ndakakwanisa kunyatsonzwisisa zvirevo zvako uye ,zvezve, ndakakwanisa kuzviisa mukuita zvizere uye nemazvo. Zvinotaridza kwandiri kuti izvo zvinonyanya kukosha kuziva maitiro ekuita kuti unzwisisike uye mune izvi zvave zviri.
Kwazisai munhu wese.
Sawa munhu wose,
Ini ndichangobva kuisa Xubuntu 14.04, ndingaite sei kuti ndiwedzere FFox?
Ini ndanga ndatotarisa mu "ubuntu software centre" (sekuratidzwa kwazvinoitwa posvo) asi zvinongondiudza chete kuti yakaiswa (iyo vhezheni iriko, nezvimwewo) uye handisi kuona kuimutsiridza kubva ipapo.
Yakanaka post, ndatenda zvikuru!
MATT SEWN akadaro
MATE inyonganiso. Ndakaiisa, ndakachinja zvandaida, ndakatsvaga kuti ndingaibvisa sei, ndakaibvisa uye…. Pandaida kupinda, ini HANDINA kuziva password. Ndakaedza nzira dzakawanda dzekupinda asi pakanga pasina nzira yekudzosera desktop yangu. Ini ndaifanira kudzoreredza Ubuntu 14.04 uye ese mapurogiramu andinoda.
Pindura kuna MATTE SEWED
Mupiro wakanaka !!!!!
Ini ndiri mutsva kumusoro uyu weGNU / Linux uye zvigadzirwa.
Mubvunzo wangu ndeweVanhu VASINA INDEYA ZVATINOGONA KUITA, kwatinogona kurodha pasi X kana Y mafomu atinoda.
Ndatenda nekuterera kwako.
yakanaka uye inoshanda bhuku riri nyore rinoshanda re newbies mu linux blog yakanaka kwazvo nekuti izvi zvinoshandiswa kupa rubatsiro, kwaziso shamwari ndatenda zvikuru kubva ku venezuela, caracas
Chinyorwa chakanaka, ruzivo rwakandibatsira zvakanyanya, maita basa kwazvo very
Compa gadza iyo ubuntu 16.04.1 32 bit, asi ini handikwanise kutamba mavhidhiyo mubrowser, tarisa mavhidhiyo mune yekunze kana yemukati ndangariro, ini handina ruzivo rwakawanda pane ino Ubuntu system, ungandiudza kuti ndinoita sei mavhidhiyo kutamba paInternet nezvimwe.
Pindura kuna martin
Isa Openbox pane Arch Linux